Mitambo muchiGerman. Iwo wekufamba mazwi mutambo wekuyeuchidza mazwi echiGerman. Mumutambo uyu, iwe uchapihwa izwi reGerman uye iwe uchaona matatu sarudzo muTurkey ichidzika kubva kumusoro kusvika pasi pachiratidziri, unofanirwa kudzvanya pazwi reTurkey rinoenderana nezwi rakapihwa reGerman. Iwe unowana mapoinzi kana iwe ukabaya pazwi chairo uye wozorasa mapoinzi kana iwe ukabaya pane risiri iro izwi.
Tinotarisira kuti mutambo uyu, wakagadzirirwa iwe kuti ufare uye udzidze seboka rechiJerman, richave rakakosha.
Mutambo uyu wakagadzirirwa foni yeshanduro java version inowanika pawebsite yedu. Mitambo yeGermany nemapurisa ekusvika pamitambo yedu yemasasa inogona kutarisa sangano redu.
Kuti uite mumaselula, teerera jar jar kuti ubudise kubva panzvimbo yedu.
Uyewo yedu yepaIndaneti anowanika yedu Android anotsanangura smartphones zvainanga kudzidza chiGerman uye Chirungu yedu Android Anwendung kuri kuwanikwa Games German & Apps pokushandisa mhando edu.
Kuti utambe mutambo uyu, unofanirwa kunge uine Java yakaiswa pakombuta yako. Zvikasadaro, unogona kusakwanisa kuona iyo skrini skrini. Kuti utore Java, shanya www.java.com/tr.
German word memorization gamemuchiGiriki mazwi echidzidzo chekuitaGerman word gamesGerman gameGerman gamesGerman games